အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ပြည်သူတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲစေမယ့် ဝါဒဖြန့်မှု အစိတ်အပိုင်း တခု အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ပြဿနာတွေကို ဦးတည် အသုံးချဖို့ ရုရှားက ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဆောင်နေပုံရပါတယ်။ အာဖရိကန် အမေရိကန်အမျိုးသား George Floyd ရဲဖမ်းထားစဉ် သေဆုံးခဲ့မှုနဲ့ အမေရိကန်က ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကို ရုရှားအစိုးရ အထောက်အပံ့ ပေးထားတဲ့ သတင်းဌာနတွေ ဖြစ်တဲ့ RT နဲ့ Sputnik တို့က သီတင်းပတ်နဲ့ချီပြီး အများအပြား ဦးစားပေးထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။
အခုအချိန်မှာ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ တင်ပြတဲ့ RT သတင်းဌာနက အမေရိကန် ရဲအရာရှိတွေနဲ့. သမဂ္ဂအရာရှိတွေကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး တင်ပြ ပေးနေတာတွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားတဲ့ အနေထား ဖြစ်နေတယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိတွေနဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေက ပြောပါတယ်။
RT နဲ့ Sputnik တို့လို ရုရှာအစိုးရ အထောက်အပံ့ပေးထား တာနဲ့ ရုရှားအစိုးရ ညွှန်ကြားမှုအောက်က သတင်းဌာန တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အမေရိကန်တွေက သံသယရှိနေကြဆဲပဲလို့ အထက်လွှတ်တော် ထောက်လှမ်းရေး ကော်မတီ ယာယီ ဥက္ကဌ Marco Rubio က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းက သဘောထား ကွဲပြားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရှိပြီးသား လူမှုရေးတင်းမာမှု အခြေနေကို ပိုဆိုးအောင် ရုရှားက ကြိုးစားချင်နေတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့သလို သြဇာကြီးတဲ့ ရဲအရာရှိတွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေကို ရုရှားက အသုံးချတာ ဒါမှမဟုတ် လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော် အမတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်း အတည်ပြုပါတယ်။
ရဲအရာရှိတွေနဲ့ ရဲအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း သူတို့ကို RT သတင်းဌာနရဲ့ ဆက်သွယ်မှုအတွက် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်လို့ VOA ကို ပြောပါတယ်။ ရဲအရာရှိတွေရဲ့ lawofficer.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တာဝန်ခံ ကတော့ ဒီသတင်းဌာနတွေ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ် ဆိုတာ တွက်လို့ မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ လုပ်နည်းကိုင်နည်းအတွက် ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြ နေကြတာကို စိတ်ပျက်ကြောင်း အိုကလာဟိုးမား က ရဲတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ ရေးသားချက်ကို ထုတ်ဝေခွင့် ပြုဖို့ RT က သူတို့ကို ဆက်သွယ်လာတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ နိုဝငျဘာ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျ ပွညျသူတှေ စိတျဝမျးကှဲစမေယျ့ ဝါဒဖွနျ့မှု အစိတျအပိုငျး တခု အနနေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျးက ရဲတပျဖှဲ့ပွဿနာတှကေို ဦးတညျ အသုံးခဖြို့ ရုရှားက ပွငျးပွငျးထနျထနျလုပျဆောငျနပေုံရပါတယျ။ အာဖရိကနျ အမရေိကနျအမြိုးသား George Floyd ရဲဖမျးထားစဉျ သဆေုံးခဲ့မှုနဲ့ အမရေိကနျက ကနျ့ကှကျဆန်ဒပွမှုတှကေို ရုရှားအစိုးရ အထောကျအပံ့ ပေးထားတဲ့ သတငျးဌာနတှေ ဖွဈတဲ့ RT နဲ့ Sputnik တို့က သီတငျးပတျနဲ့ခြီပွီး အမြားအပွား ဦးစားပေးထုတျလှငျ့ခဲ့တာပါ။
အခုအခြိနျမှာ အထူးသဖွငျ့ အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ တငျပွတဲ့ RT သတငျးဌာနက အမရေိကနျ ရဲအရာရှိတှနေဲ့. သမဂ်ဂအရာရှိတှေကေို ဆကျသှယျ မေးမွနျးပွီး တငျပွ ပေးနတောတှဟော အမရေိကနျနိုငျငံတှငျး တငျးမာမှုတှေ ဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားတဲ့ အနထေား ဖွဈနတေယျလို့ အမရေိကနျ အရာရှိတှနေဲ့ လှတျတျော အမတျတှကေ ပွောပါတယျ။
RT နဲ့ Sputnik တို့လို ရုရှာအစိုးရ အထောကျအပံ့ပေးထား တာနဲ့ ရုရှားအစိုးရ ညှနျကွားမှုအောကျက သတငျးဌာန တှရေဲ့ လုပျဆောငျမှုအတှကျ အမရေိကနျတှကေ သံသယရှိနကွေဆဲပဲလို့ အထကျလှတျတျော ထောကျလှမျးရေး ကျောမတီ ယာယီ ဥက်ကဌ Marco Rubio က ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံတှငျးက သဘောထား ကှဲပွားမှုကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ရှိပွီးသား လူမှုရေးတငျးမာမှု အခွနေကေို ပိုဆိုးအောငျ ရုရှားက ကွိုးစားခငျြနတေယျလို့ ပွောကွားခဲ့သလိုသွဇာကွီးတဲ့ရဲအရာရှိတှနေဲ့သူတို့ကို ထောကျခံသူတှကေို ရုရှားက အသုံးခတြာ ဒါမှမဟုတျ လှမျးမိုးဖို့ ကွိုးစားနတောနဲ့ ပတျသကျပွီး လှတျတျော အမတျတှကေ စိုးရိမျနကွေတယျလို့လညျး အတညျပွုပါတယျ။
ရဲအရာရှိတှနေဲ့ ရဲအဖှဲ့အစညျးတှကေလညျး သူတို့ကို RT သတငျးဌာနရဲ့ ဆကျသှယျမှုအတှကျ အံ့အားသငျ့ခဲ့ရတယျလို့ VOA ကို ပွောပါတယျ။ ရဲအရာရှိတှရေဲ့ lawofficer.com ဝကျဘျဆိုဒျ တာဝနျခံ ကတော့ ဒီသတငျးဌာနတှေ ဘယျအဖှဲ့အစညျးနဲ့ ဆကျနှယျနတေယျ ဆိုတာ တှကျလို့ မရဘူးလို့ပွောပါတယျ။ ရဲတှရေဲ့ လုပျနညျးကိုငျနညျးအတှကျ ပွညျသူတှေ ဆန်ဒပွ နကွေတာကို စိတျပကျြကွောငျး အိုကလာဟိုးမား က ရဲတာဝနျရှိသူတဦးနဲ့ ရေးသားခကျြကို ထုတျဝခှေငျ့ ပွုဖို့ RT က သူတို့ကို ဆကျသှယျလာတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ရုရှားယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး COVID-19 ကူးစက်နေ
ရုရှားမှာ Covid-19 ကူးစက်သူ အလျင်အမြန် တိုးများနေ
COVID-19 အခြေအနေ ဆိုးလာတဲ့ ရုရှားမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အောင်ပွဲနေ့ကို အကျဉ်းချုံးကျင်းပ
ရုရှားမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး ၄ ဦးအထိ ရှိလာ
ရုရှားမှာ ကိုဗစ် စစ်ဆေးမှုတွေအရှိန်မြင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ သမ္မတ ပူတင် ညွန်ကြား